Naby Keita → Liverpool, David De Gea → Real Madrid, Benjamin Mendy → Man City, Aubameyang →Ac Milan iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku – Kooxda.com
Home 2017 July Suuqa, Wararka Maanta Naby Keita → Liverpool, David De Gea → Real Madrid, Benjamin Mendy → Man City, Aubameyang →Ac Milan iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku
Naby Keita → Liverpool, David De Gea → Real Madrid, Benjamin Mendy → Man City, Aubameyang →Ac Milan iyo Wararkii Subaxnimo Ee Ay Qoraan Wargaysyada Caalamku
July 14, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Real Madrid ayaa dalab kama dambays ah kula tagaysa kooxda Man United iyada oo ka doonaysa goolhayaha reer Spain ee David De Gea iyada oo miiska u saari doonta dalab dhan 50 Miyan oo euro (Daily Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa diidan in ay isaga harto xiisaha ay u qabto xiddiga khadka dhexe ee Naby Keita inkasta oo ay kooxda Red Bull Leipzig ka soo diiday dalab dhan 60 Milyan oo euro (Daily Mirror).
Kyle Walker ayaa noqon doona daafacii uu qaalisanaa ee taariikhda kubada cagta marka uu kooxda Man City ugu biiro lacag dhan 54 milyan oo euro (Daily Mirror).
Kooxda man City ayaa sii wadi doonta lacagta ay suuqa galinayso iyada oo soo afjari doonta saxiixa daafaca Monaco ee Benjamin Mendy isaga oo 50 Milyan ugu soo biiri doona Citizen (Daily Mirror).
Zlatan Ibrahimovic ayaa wadahadalo kula jira kooxda LA Galaxy xilli ay khabiirkan ku soo jiidanayaan mushahar qaali ah uu uu sanadkii ku qaadan doono 6 Milyan oo euro (Daily Mirror).
Kooxaha chelsea iyo Man City ayaa qarka u saaraan in ay seegaan xiddigii wakhtiga dheer bartilmaameedka u ahaa ee Leonardo Bonucci kaas oo qarka u saaran in uu dhamaystiro ku biiristiisa kooxda Ac Milan (Daily Mirror).
Ac Milan ayaa sidoo kale isku diyaarinaysa in ay weeraryahanka Pierre-Emerick Aubameyang ka dhigto xiddiga ugu mushaharka badan horyaalka Serie A (The Sun).
Chelsea ayaa ugu dambayn ku dhow in ay dhamaystirto saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Tiemoue Bakayoko kadib markii labada kooxood ka heshiiyeen qiimaha xiddiga (The Sun).
Nemanja Matic ayaa si xoogan u doonaya in uu ku biiro kooxda man United xilli xiddigan reer Serbia laga saaray tababarka kooxda isaga oo kaligii tababar qaadanaya (The Sun).